बाघ पारस, डमरू सोनिका ! ‘बाघ जहिले नि बाघ नै हुन्छ, जहाँ पनि गर्जने क्षमता राख्छ। – ईमेची डटकम
Posted byइमेची संवाददाता September 19, 2019 September 19, 2019 Leaveacomment on बाघ पारस, डमरू सोनिका ! ‘बाघ जहिले नि बाघ नै हुन्छ, जहाँ पनि गर्जने क्षमता राख्छ।
काठमाडौं। पुर्वयुवराज पारश शाह गलत कामका कारण चर्चामा रहिरहन्छन् । विमानस्थलमा पारशले प्रहरीमाथि गरेको दुव्र्य*वहारको चर्चा चल्यो। उनले छोरा हृदयन्द्रको अनुहारमा प्रहरीको डण्डा देखेपछि होश गुमाएको समाजिक संजालमा बताएका थिए ।
अराजक स्वभावका पारशले यसअघि पनि ट्राफिक प्रहरीलाई दुव्र्य*वहार गरेका थिए । शाहको उद*ण्ड व्यवहार जतिनै सार्वजनिक भएपनि उनलाई कानुनले नछोएको प्रतिक्रियाहरु आएको छ । पारशको छवि सुध्रेको समाचारहरु नआउँदै उनको झग*डा सार्वजनिक हुने गरेको छ । कहिले ट्राफिक प्रहरीमाथि नै गाडी कुदाउन खोज्ने त कहिले ड्युटिमा रहेका प्रहरीलाई धकेले*को घट्ना सार्वजनिक भएपछि पारश विवा*दमा तानिएका हुन् ।
उद*ण्ड स्वभावका पारश क्लबमा भने खुलेको देखिन्छन् । केहि पहिला मोडल सोनिका रोकायाको संयुक्त तस्बिर समाजिक संजालमा भाइरल नै बनेको थियो।
काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको लिक्वीड लाउञ्ज एण्ड बारको संचालक समेत रहेकि रोकायासँग पूर्वयुवराज पारस शाहको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि निकै नकारा*क कमेन्ट अाए । । पछिल्लो समयमा उनमा आध्यात्मिक बन्ने रहर जागेको पनि उनीनिकटका श्रोतले बताएका थिए । तीनपटक हृद*यघात भइसकेको पारशको पारिवारिक सम्बन्ध अहिले भने राम्रै देखिन्छ ।
‘बाघ जहिले नि बाघ नै हुन्छ, जहाँ पनि गर्जने क्षमता राख्छ। बिरालो सम्झेर बाघलाई जिस्क्याउने चेष्टा नगरे हुन्छ।’
पुर्वयुवराज पारस शाहलाई मोडल सोनिका रोकाया ‘बाघ’ सम्बोधन गर्छिन्। त्रिभुवन विमान स्थलमा प्रहरीलाई चेकजाँचका क्रममा हा*तपा*त गरेपछि पारस वि*वादमा तानिए।
त्यसै घटनामा पारसलाई समर्थन गर्दै सोनिकाले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘बाघ जहिले नि बाघ नै हुन्छ, जहाँ पनि गर्जने क्षमता राख्छ। बिरालो सम्झेर बाघलाई जिस्क्याउने चेष्टा नगरे हुन्छ।’
उक्त पोस्ट सहितको तस्बिरमा भने सोनिका डमरुसरह बाघको अँगालोमा देखिन्छिन्। उनी बाघका दुई पञ्जाले घेरिएकी छन्। अब डमरुलाई बाघको पञ्जासँग केको डर ?
Posted byइमेची संवाददाता September 19, 2019 September 19, 2019 Posted inमनोरञ्जन, समाचार
समुन्द्रमा तेरियाको पोज…(फोटो फिचर)